Salaamanews » Kenya oo kooxda Al-shabaab ku eedeysay weerar ka dhacay Dhadhaab
Home » Warar Kenya oo kooxda Al-shabaab ku eedeysay weerar ka dhacay Dhadhaab Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 5th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Baadarigii ugu weynaa kaniisadda Mandheera oo la dilayPuntland oo si kulul kaga hadashay dagaal ka dhacay gobolka BariWeerar ay dad Soomaali ah ku dhinteen oo ka dhacay Degmada DhadhaabSonkorta Soomaaliya laga soo dhoofiyo ayaa maalgalinaysa al-Shabaab, madaxda Kenya ayaa sidaas lehWarbixin iyo muuqaal: Raafka Kenya iyo Soomaalida oo bilowday in ay dib ugu noqdaan dalkooda
(Salaamanews)-Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxay bombaanooyin lagu weeraray xeryaha qaxootida Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari wadanka Kenya.
Dad goob jogayaal ah ayaa noo sheegay in weerar lagu qaaday xirada Dhagaxley degmada Dhadhaab ee dalka Kenya, halkaasi oo ay dhimasho dhaawac ka soo gaartay dad rayid ah.
Inta la og yahay labo ruux oo Soomaali ayaa ku geeriyootay,todobo-kalena dhaawac ayaa soo gaaray, kadib markii qarax bambaano xalay lagu weeraray meel maqaaxi ah oo ku taal Xerada qaxootiga Dhagaxleey.
Wararka ayaa sheegaya in gaari kuwa raaxada ah laga dhex tuuray bambaanada, kaasoo ahaa mid si xowli ah ku socday, sida dad ku dhaqan Dhagaxley ay xaqiijiyeen.
Wararka ayaa sheegaya in goobta bamka lagu weeraray ay aheyd meel dhalinyarada ku caweeyaan, iyadoo aan la ogeyn cida ka dambeysa weerarkaas.
Sarkaal u hadlay baliiska gobolka waqooyi bari ayaa ku eedeeyay weerarkaas inay ka dambeeyaan kooxo ka tirsan Al-Shabaabka ka dagaallama gudaha dalka Soomaaliya.
Weerarkan ayaa qeyb ka noqonaya weeraro taxane ahaa oo kuwii ugu dambeeyay sanadkan uu ka dhaco gudaha dalka Kenya.
Tags: warar « Qoraalkii HoreDowladda oo Muqdisho ku soo bandhigtay la heystayaal muddo gacanta ugu jiray burcad badeedda Soomaalida	Qoraalka Xiga »Yuusuf Xaaji “Madaxda Kenya iskuma raacsana in Soomaalida dib loo celiyo”	Halkan Hoose ku Jawaab